आउनुहोस् भट्टीमा रक्सी धोकेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरौं । | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, असार ७, २०७७ मा प्रकाशित
सुनिस् झुम्री ।
के कुरो !
अम्रिकामा स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको खोजी अरे । त्यही देशलाई धर्तीको स्वर्ग, स्वतन्त्रताको जननी, न्यायको संरक्षक भन्छन् क्यारे ।
तिमी कुरो बुझ्दैनौ बुढा । भन्नु एउटा कुरा हो हुनु र गर्नु अर्कै कुरा हो ।
ए झुम्री समाचारहरु पढिस् केके भयो अरे ! लौलौ एक पटक सरर सुना त ।
अस्ति हाम्रो इन्डिया र चाइनाको सेनाहरु कुटाकुट गरे छ । हाम्रो इन्डियाले भनेको चाइना तिर ठूलो हताहती भयो अरे ।
हैन हौं, अनि हाम्रो इन्डियातिर चैने केही भएन छ ?
यता त के हुनु चाइनेले २० जना चैं हाम्रो इन्डियन सेना मारे छ ।
लौ सत्यानास गरे छ । कतै हाम्रो गोर्खेहरु त परेनन् ?
हौ दिदी भेना नमस्कार है !
हैन लाक्पा कहाँबाट टुप्लुक्क आई पुगिस् हँ !
कहाँबाट हुनु । गाउँबाट दिदी भेनालाई भेट्न भनेर आको नि ! बाउ–आमाले जा डोल्मालाई सामान पु¥याएर आ भन्यो अनि आको नि !
हैन भारी त ठूलै पो ल्याएछस् त । यत्रो भाँडी केके बोकी ल्याइस् हौ ।
कुख्राको भाले र एक कठूवा तीन पाने ल्याकै छ । भरे साला–भेना मिलेर खगेन्द्र संग्रौलाले जस्तो चिरिप्प पारेर प्रधानमन्त्री ओली र यो सरकारलाई तथानाम गाली गर्नु पर्छ ।
भने’सी आज यो डोल्पाको मेरो भेडी गोठ पनि काठमाडौं चावेलको रक्सी भट्टी हुने भयो । ए… झुम्री दुईटा पेला ठिक पार्त !
को झुम्रीलाई भनेको भेना !
तेरो दिदी डोल्मालाई झुम्री भनेर बोलाउने गरेको छ । अँ भन त हौ लाक्पा सदरमुकाममा बसेर त थाहा पाइस् होला काठमाडौं तिर खबर के छ अरे !
त्यस्तो केही छैन भेना ! लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत भूभाग भारतकै हो भनेर सरिता, बाबुराम, महन्थ, खगेन्द्र, सिके लाल, विजयकान्त, कृष्ण पहाडीहर्ले भने क्यार ! यता हाम्रो भारत र चाइनाको हानाहानमा चै यिनार्ले हत्यारा चाइना मुर्दावाद भनेर नारा लगाए क्यारे !
हौ लाक्पा हाम्रो गोर्खालीलाई मान्नु पर्छ । भारत, अम्रिका, युरोपियन युनियन जसको भए पनि निमकको सोझो चैं गर्छ क्या ! होइन त्यो चाइना भन्नेलाई हाम्रो इन्डियाले केही गर्न सकेन छ ?
भारतको मिडिया जति सप्पै मिलेर चाइनालाई ध्वस्त बनायो । चाइनाले चैं एउटा कर्नेलसहित २० जना भारतीय सैनिकलाई पानीमा चोपलेर नराम्रोसंग मारे छ ।
कठैबरा ! नेपाल जस्तो ठान्यो होला । उता प¥यो चाइना । धुस्नो काडे छ नि । निहुँ चै के परेछ नि लाक्पा !
लद्दाखको कुन्नि के भन्ने ठाउँको सिमानामा चाइनिज सेनाको पोष्ट थिएछ । त्यही भत्काउन गएको चिलिम फर्काएछ । यता काठमाण्डौमा ‘हत्यारो चाइना मुर्दावाद’ भनेर कृष्ण पहाडीहरु मुखमा नकाव लगार उफ्री रा’को ।
मानव अधिकारवादी भनेको भारत अधिकारवादी नै हो नि ! ठिक गरेछ । उता अम्रिकामा एउटा कालो मान्छेको घाँटी थिचेर कुइरेले मार्दा र रुकुमतिर हाम्रो दलित मार्दाको घटनाको बिरोधमा नेपालका लेखकहरु साथै मानव अधिकारवादीहर्ले ठूलो विरोध ग¥यो होला हगि !
लौ भेना पनि ! त्यस्तोको विरोध गर्ने हो त हाम्रो हर्ले ! हाम्रो हर्ले त भारत, अम्रिका, युरोपियन युनियनको समर्थनमा मात्र आन्दोलन गर्ने हो नि ! उनार्को बिरोध ग¥यो भने अनि डलर र भारु काँट आउँछ ?
लु त्यो कुरो छोड्दे ! बरु काठमाडौमा युवाहर्को सितैंको आन्दोलन चलेको छ भन्थ्यो नि त्यो चैं के भयो ?
त्यो आन्दोलन चैं गजबको आन्दोलन थिएछ । प्लेकार्ड नै गजब गजबको बोकेको । एउटा केटाले ‘म केटी हेर्न आको’ भनेर लेखेको प्लेकार्ड बोकेको । अर्की एउटीले बोकेको, प्लेकार्ड चैं पढ्न नहुने खालको थियो । टिभीले सबै देखायो ।
के गर्छस् लाक्पा हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । पिसिआर परीक्षण गर्ने मेशिन प्रत्येक नगरपालिकामा राखेर जाँच गर्नुपर्ने गर्दैन ।
आरडिटी र केजाती भनेर बस्छ । त्यस्तो महंगो मेशिन पनि होइन र’छ ! एक डेड करोडमै आउने र’छ । यस्तो बेला कोरेन्टिनमा बसेका हर्को बेलैमा पिसिआर परीक्षण नभए पछि सरकारको विरोधी त बढ्छन् नै ।
आ भेना छोड अब यो कुरा ! भित्र गएर रक्सी धोक्ने हो । रमरम भए पछि केपी ओली र यो सरकारलाई तथानामा गाली गर्ने हो । अरु
जे सुकै होस् । अब धन्दा सुर्ता आरे है !